Booliska Kenya oo weeraray Jaamacad ku taalla Nairobi, Khasaaraha ka dhashay iyo Ujeeddada laga lahaa | Saxil News Network
Booliska Kenya oo weeraray Jaamacad ku taalla Nairobi, Khasaaraha ka dhashay iyo Ujeeddada laga lahaa
Nairobi(Saxilnews.com)- Hal Qof oo ka mid ahaa Hawl-wadeennada Jaamacadda Strathmore ee dalka Kenya, ayaa geeriyooday, in ka badan labaatan kale oo Ardayda Jaamacaddaas ka tirsainna way dhaawacmeen, ka dib markii Booliska dalkaasi ay hawlgal Tijaabo aha aka sameeyeen gelinkii dambe ii Isniinta Jaamacada Strathmore ee ku taalla Magaalada Nairobi ee Caasimadda Kenya.
Howlgalka oo ahaa mid qarsoodi ah, ayaa lagu sheegay inuu ahaa tijaabo lagu ogaanaayay sida ay Ardaydu oga jawaab celin lahaayeen haddii Jaamacaddaas uu ka dhaco weerar argaggixiso, waxaanay Ciidanka Booliska Kenya hawl-galkaas fuliyeen xilli qofna aan loo sii sheegin waxa dhici doona iyo ujeeddada hawlgalka toona.
Japheth Koome oo ah Taliyaha Ciidammada Booliska ee gobolka Nairobi, ayaa hawl-galkaas ku sheegay inuu ahaa mid sharciga waafaqsan oo lagu eegayay feejignaanta Ardayda tirada badan ee Jaamacadaas wax ka barata.
Qofka geeriyooday oo ahaa Gabadh dhanka Nadaafadda ka shaqeyneysay, ayaa wakhtigii ay geeriyooneysay waxaa ka jiray dhismaha Jaamacaddaas is-buurasho xoogan maaddaama oo ay Ardaydu ku saseen oo ay ka naxeen dhawaaqa Rasaasta ay Ciidammada Ammaanku kor u ridayeen.
Qaar ka mid ah Ardayda, ayaa la sheegay iney iska soo tureen oo ay ka soo boodeen Dabaqyada afraad iyo Shanaad ee dhismaha Jaamacadda oo ku yaalla agagaarka Xaafadda Lang’ata ee magaalada Nairobi, halka kuwa kalena ay isku qariyeen Musqulasha Jaamacadda iyo laablaabka dhismayaasha qaarkood.
Hay’adda Laanqeyrta Cas ee dalka Kenya, ayaa sheegtay in dhacdadaas ka dib ay Ardaydii dhaawacantay loola cararay qaar ka mid ah Cusbitaallada magaalada Nairobi oo ay ka mid yihiin Nairobi West iyo Mater Hospital si gar-gaar caafimaad loogu fidiyo.
Goob-joogayaal, ayaa iyaguna sheegay in Ciidammada Booliska gaar ahaan kuwa Bir-madka ee loo yaqaanno AP-da (Administration Police) ay si kedis ah u galeen Jaamacadda, iyagoo iska dhigaayay koox soo weerartay Jaamacadda, waxaanay kor u ridayeen rasaas nool oo ay damacsanayeen inay ku baqdin geliyaan Ardayda, Macallimiintooda iyo weliba Maamulka iyo Shaqaalaha Jaamacadda oo aan hore loogu sii wargelinin hawl-galkaas tijaabada ahaa.
Shacabka Kenya, ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay hawl-galkaas mala’awaalka ahaa ee la sheegay in laga kor fuliyay Arday Waxbarashadoodii ku jira, xilli aan sidoo kalena lagu war-gelin Ciidammada Booliska ee Saldhigga ku leh aagga ay Jaamacaddaasi ku taallo.